Wadooyonka qaar ee Muqdisho oo xiran & sababta loo xirey – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ardaan Yare 2 January 2020
Waxaa saaka xiran qaar kamid ah wadooyinka ugu muhiimsan Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho,iyada oo la filayo in saacadaha soo socda uu Magaalada muqdisho ka dhaco banaanbax uu soo qaban qaabiyey Maamulka Gobolka Banaadir.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya ayaa xirey wadooyin ay kamid yihiin,agagaarka Taalada Dajirka Daahsoon, wadada ka baxda Suuqa Beerta ee aada dhinaca wadada Maka Almukarama,wadada ka baxda Isgoyska Ceelgaabta ee aadan dhinaca Isgoyska Xamar jajab iyo wadooyin kale,kuwaas oo loo doodayo inay Gadiidka noocyadiisa kala duwan isticmaalaan.
Sababaha wadooyinka Maanta loo xirey ayaa waxaa lagu sheegay in saacadaha soo socda uu Xerada tababarka Ciidamada Booliska ee Janeraal Kaahiya in lagu qabto banaanbax looga soo horjeedo Ururka Al-Shabaab looga xun yahay qarixii dhawaan ka dhacay Isgoyska Ex-Koontorool Afgooye.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa maalin ka hor iclaamiyey banaanbaxaas oo la filayo inay ka qeyb galaan Madax ka tirsan dowladda Federaalka,ururada dhalinyarada Gobolka Banaadir iyo dadka qaar ee Muqdisho.
Ammaanka Magaalada muqdisho ayaa aad loo adkeeyey tan iyo qarixii Ex-koontorool,waxaana xalay qeybo kamid ah degmada Waaberi ee Gobolkan Banaadir ay Ciidamada Dowladda ka sameyeen howlgaloo baaritaano ah.
Korneyl Caare oo la heshiiyey Soomaaliland